ကျွန်တော်ကြိုက်သော Web Site များ - specialkyawmyothant
ကျွန်တော်၏ တစ်ဝမ်းကွဲ ညီမများနှင့် ဓာတ်ပုံများ
ကျွန်တော်ကြိုက်သော-Flash Songs များ
ကျွန်တော်ကြိုက်သော Web Site များ
ဗီဒီယိုများ၊ သီချင်းများ နားဆင်ရန်
ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် MP3 သီချင်းများ
ယခုလို အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒါလေးကတော့ ကိုယ်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ပြင်ရာမှာ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဝက်ဆိုဒ်လေးပါ။
တရားတော်တွေကို video ရော၊ audio တွေကို စိတ်ကြိုက်ဒေါင်းနိုင်တယ်။ ဒီမှာ
အလှအပဆိုင်ရာ Website များ
( ၁) http://www.beauty.com
( ၂) http://www.khinsanwin.com
( ၃) http://www.dglabphoto.com
( ၄) http://www.allwalk.com
( ၅) http://www.yanifashion.com
( ၆) http://www.erosspa.com
( ၇) http://www.camella.casmetic.com
( ၈) http://www.revlon.com
( ၉) http://www.pansagar.com
(၁၅) http://www.style.com ကြိုက်တဲ့ ၀က်ဆိုဒ်ကို နိုပ်လိုက်နော်သူငယ်ချင်းတို့--
ကျော်မျိုးသန့် (ခွက်ခွင်းသား) :P
လက်ဆောင်ပေးပို့ရန် Website များ
ကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျော်မျိုးသန့်(ခွက်ခွင်းသားလေး)
ပိုစတာဒီဇိုင်း(၅)သိန်းကျော်လောက်တွေ့ရမည်။ ဒီမှာ နိုပ်ပါ။
ဒီဇိုင်းရေးပြီးသားများ အသင့်ရယူနိုင်သည်။ ဒီမှာ နိုပ်
MP3 - free download sites များ မြန်မာသီချင်းsites များ
(၇) http://www.innwa.com/ နိုပ်ပြီးတော့ ဒေါင်းကြပေးတော့။ ကျော်မျိုးသန့်
1.ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အမှတ်တရသီချင်းများ MP3 ဒီမှာ နိုပ်ပါ။
2.Photoshop, Undo -Redo အကြောင်း ဒီမှာ နိုပ်ပါ။
3.ဆော့ဝဲလ်မပါဘဲ folder lock ချတဲ့နည်း ဒီမှာ နိုပ်ပါ။
4. ဓာတ်ပုံပြင်တဲ့ ၀က်ဆိုဒ်လေးတစ်ခုပါ။ကောင်းတယ်နော် ဒီမှာ နိုပ်
1/ ဓာတ်ပုံပြင်ဆင်စရာ (1)
2။ ဓာတ်ပုံပြင်ဆင်စရာ (2)
3။ ဓာတ်ပုံပြင်ဆင်စရာ (3)
4။ ဓာတ်ပုံပြင်ဆင်စရာ (4)
5။ ဓာတ်ပုံပြင်ဆင်စရာ (5)
6။ ဓာတ်ပုံပြင်ဆင်စရာ (6)
english - Myanmar,
hebrew - Myanmar,
greek - Myanmar,
portuguese - Myanmar,
arabic - Myanmar,
spanish - Myanmar,
norwegian - Myanmar,
swedish - Myanmar,
danish - Myanmar,
german - Myanmar,
russian - Myanmar,
japanese - Myanmar,
chinese - Myanmar,
korean - Myanmar,
malay - Myanmar,
vietnamese - Myanmar,
thai - Myanmar,
hindi - Myanmar,
romanian - Myanmar,
french - Myanmar,
finnish - Myanmar,
filipion - Myanmar,
polish - Myanmar & dutch - Myanmar.
ကွန်ပျူတာပညာလေ့လာ လိုသူများအတွက် မြန်မာစာအုပ်တွေရှိတဲ့နေရာ။(E-BooK)
ကွန်ပျူတာ နည်းပညာရပ်များကို စတင်လေ့လာနေသူတွေအတွက် အမြဲတမ်းစာအုပ်အသစ်တွေနဲ့
Update to Date ဖြစ်နေတဲ့ဝက်ဆိုဒ်လေးကို ညွှန်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ကွန်ပျူတာ အခြေခံကိုစတင်
လေ့လာသူတွေအတွက်ရော..ပရိုဂရမ်စတင်လေ့လာသူ၊Network စဖြင့် မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ စာအုပ်
ပေါင်းစုံကို အမြဲတမ်းတင်ပေးနေကျစာအုပ်ဆိုဒ်ကလေးပါ။လေ့လာစရာတွေကတော့ မကုန်နိုင်မခမ်း
ဒီနည်းစနစ်တွေကတော့ မြန်မာပြည်အလည်ပြန်လာမှ သိတဲ့နည်းစနစ်တွေပါ။ မြန်မာပြည်ကော်နရှင်အား အံတုနိုင်အောင် စိတ်တိုင်းကျမွှေနှောက်ထားတဲ့ နည်းလေးတွေပါ။
ကျွန်တော်ဆိုဒ်က Useful Link က ဆိုဒ်တွေစုစည်းပေးတာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စုစည်းတာ မဟုတ်တာများတယ် ။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ပိုစ့်တွေဆိုရင် အောက်ဆုံးမှာ ကျွန်တော်နာမည်အမြဲတမ်းထည့်တယ် ။ ဒီတစ်ခါကျွန်တော် လေ့လာစရာဝက်ဆိုဒ်တွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ တစ်ခုချင်းကို မိတ်ဆက်ပေးဖို့ မလွယ်လို့ တစ်ခုချင်းစီသွားပြီး ။ မိမိဝါသနာပါရာကို လေ့လာနိုင်ကြောင်းပါဗျာ ။ တော်တော်လေးကို ကောင်းပါတယ် ။ ကျွန်တော်တောင် အကုန်မကြည့်ရသေးကြောင်းပါ ။ 3D,2D ဘာတွေညာတွေတော့ စုံနေတာပဲဗျာ ။ လေ့လာကြည့်လိုက်စမ်းပါ ။ သင့်အတွင် အကျိုးရှိစေမှာပါ ။
(23)Free Directory -